कसरी तपाईंको घर वाईफाई कभरेज वाईफाई पीएलसी प्रयोग गरेर सुधार गर्ने आईफोन समाचार
कसरी तपाईंको घर वाइफाइ कभरेज वाईफाई पीएलसी प्रयोग गरेर सुधार गर्ने
हामीले पहिले नै धेरै अवसरहरूमा छलफल गरिसकेका छौं कसरी तपाईंको घरको वाइफाइ नेटवर्क सुधार गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपलब्ध च्यानल छनौट गरेर वा वाइफाइ रिपीटरहरू प्रयोग गरेर। आज हामी एक पाइला अगाडि जान लाग्दछौं र हामी तपाईंलाई कसरी तपाईंको WiFi नेटवर्कबाट सिग्नल ती ठाउँहरूमा पुग्ने छौं जहाँ पर्याप्त गुणस्तर र त्यस्तै अन्य चीजहरू आउँदैनन् भनेर बताउने छौं। घरको हरेक कुनामा इन्टरनेटको मजा लिन हामी सक्षम हुन, र हामी यसलाई गर्न जाँदैछौं "PLC WiFi" नामक केही उपकरणहरू धन्यवाद।। म तल तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन् भनेर वर्णन गर्दछन्, साथै आदर्श कन्फिगरेसन पनि हुन्छ ताकि सबै कुरा राम्ररी काम गर्दछ।
1 पुनरावर्तक बनाम पीएलसी बनाम PLC-WiFi
2 सुविधाहरू जुन वाइफाइ PLC हुनु पर्छ
3 वाइफाइ PLC कन्फिगरेसन
4 परिणाम: सबै ठाउँमा वाइफाइ
पुनरावर्तक बनाम पीएलसी बनाम PLC-WiFi
पहिले हामी के कुरा गर्दैछौं भनेर जान्न धेरै स्पष्ट अवधारणाहरू छोड्नुहोस्। तपाईंको घर नेटवर्क विस्तार गर्न त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, र हामी तिनीहरूलाई सारांशमा यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं:
एक वाइफाइ पुनरावर्ती यो एक हो जसले वाइफाइ सिग्नल लिन्छ र यसलाई फिर्ता पठाउँदछ, अधिक कभरेज प्राप्त गर्दै। तिनीहरू सजिलो कन्फिगरेसनको साथ उपकरणहरू हुन्, सस्तो मूल्य र धेरै विवेकीको साथ, किनकि तपाईंलाई चाहिने सबै तिनीहरूलाई प्लग हो जहाँ तिनीहरूलाई राख्नुपर्दछ। उनीहरूसँग समस्या भनेको उनीहरूले सँधै गुणस्तरीय नोक्सान भोग्नुपर्दछ जुन तपाईंले यसलाई राख्नु भएको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यदि तपाईंले यसलाई मुख्य राउटरबाट टाढाको ठाउँमा राख्नुभयो भने, तिनीहरूले प्राप्त गर्ने संकेतको गुणस्तर खराब छ, र त्यसैले तिनीहरूले दोहोर्‍याएको संकेत अझ खराब छ।
एक PLC यो एक उपकरण हो जुन तपाईंको ईन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गर्न तपाईंको घरको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रयोग गर्दछ। कम्तिमा तपाईंलाई दुई उपकरणहरू चाहिन्छ, एउटा इथरनेट केबलले मुख्य राउटरमा जडित र कुनै पनि विद्युतीय आउटलेटमा प्लग इन, र अर्को जुन टाढाको बिजुलीको आउटलेटमा प्लग इन हुन्छ कि त्यसले स signal्केत संकलन गर्दछ र इथरनेट केबल मार्फत अन्य कुनै यन्त्रमा प्रसारण गर्दछ जुन उहाँसँग कनेक्ट हुन्छ। तपाईंसँग रहेको विद्युतीय स्थापनामा निर्भर गर्दै, संकेतको नोक्सानी बढी वा कम हुन्छ, तर तिनीहरूसँग त्यस्तो नोक्सान हुन्छ कि उनीहरूले वायरलेस जडान अनुमति दिँदैन, केवल ईथरनेट केबल मार्फत।
एउटा PLC-WiFi यसले दुई अघिल्लो उपकरणहरू संयोजन गर्दछ: यसले तपाईंको गृह इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गर्न बिजुली नेटवर्क प्रयोग गर्दछ, र दोस्रो रिसिभरले त्यो संकेत लिन्छ र वाइफाइ पहुँच पोइन्ट सिर्जना गर्दछ जहाँ उपकरणहरूले वायरलेस जडान गर्न सक्दछ।
यस ग्राफिकले तस्वीरहरू देखाउँदछ जुन PLC-WiFi हो। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मुख्य एकाइ इथरनेट केबलले मुख्य राउटरमा जडान गरिएको छ, यसलाई पावर आउटलेटमा प्लग इन गरिएको छ (सँधै पर्खालमा सिधा, कुनै गुणन वा समान समान), र lअर्को सकेटमा जोडिएको उपग्रह इकाईले त्यो इन्टरनेट स signal्केत प्राप्त गर्दछ र अन्य उपकरणहरूमा वायरलेस रूपमा प्रसारित गर्दछ। यो पनि सामान्यतया ईथरनेट सकेट एक उपकरण केबल मार्फत जडान गर्न, राम्रो गति प्राप्त गर्न। अर्को फाइदा यो हो कि तपाईं विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै उपग्रह एकाइहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ वाईफाई कभरेजको अधिक विस्तार प्राप्त गर्न।
सुविधाहरू जुन वाइफाइ PLC हुनु पर्छ
तिनीहरू धेरै विविध छन् र सबै सम्भावित डिजाइन र रंगहरूको, अधिक गति वा कमको साथ, डुअल-ब्यान्ड, 802.11०२.११ एएसीसँग उपयुक्त ... र निस्सन्देह, मूल्यहरू एक अर्कामा धेरै फरक हुन्छन्। मेरो केसमा मैले तपाईंलाई छविमा देखेको मोडलको लागि रोजेको छु (अमेजनमा € .०)। आईईईई 50०२.११ बी / जी / एन मानकको साथ M०० एमबीपीएस सम्मको गतिसँग, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको नेटवर्क क्लोन गर्न सक्षम.
यो विवरण किन महत्त्वपूर्ण छ? म घरमा एकल नेटवर्क कायम राख्न चाहन्छु (लुइसको नेटवर्क), परम्परागत पुनरावृत्तिको रूपमा होइन जुन तपाईंको लागि नयाँ नेटवर्क सिर्जना गर्दछ (लुइस एक्सको नेटवर्क)। यस प्रकारका सबै उपकरणहरू यो गर्न सक्षम छैनन्, त्यसैले क्लोनिंग समावेश गरिएको विशिष्टताहरू हेर्नुहोस्। यसबाट म के पाउन सक्छु? ठीक छ, मेरो उपकरणहरू एक एकल नेटवर्कमा जडान, र केवल एक म उत्तम ठाउँमा कभरेजको साथ लिनुहोस् जहाँ म छु। दुई फरक नेटवर्कमा जडान हुनुका फाइदाहरू छन् जब यो फाईलहरू साझा गर्न आउँदछ, उदाहरणका लागि।
बाँकी विनिर्देशहरू तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर हुनुपर्दछ। स्पष्ट रूपमा राम्रो चश्मा, उत्तम PLC, तर तपाईं यसको फाइदा लिन गइरहेका छन् कि भनेर सोच्नुहोस्, किनभने किनभने साधारण तथ्य यो हो कि यो डुअल-ब्यान्ड (२.2,4 र G GHz) ले यसको मूल्य दोगुना गर्न सक्दछ.
वाइफाइ PLC कन्फिगरेसन
यो धेरै सरल छ, वा कम्तिमा यो हुनु पर्छ। मूल रूपमा यो ट्रान्समिटरलाई पावर आउटलेटमा प्लग गर्ने र यसलाई इथरनेट मार्फत मुख्य राउटरमा जोड्ने कुरा हो। त्यसो भए क्षेत्रको अर्को आउटलेटमा उपग्रह जडान गर्नुहोस् जहाँ तपाईं गरीब कभरेज पाउनुहुन्छ र सबै चीज लगभग समाप्त हुनेछ। यो प्रक्रियाको साथ तपाईसँग मुख्य वाईफाइ भन्दा फरक वाइफाइ नेटवर्क हुनेछ, जुन मैले तपाईलाई भनेको छु मैले खोजेको होइन। यस TP-Link मोडेलमा क्लोन बटन छ जसले सबै चीज धेरै सजिलो बनाउनुपर्दछ, तर मसँग एप्पलको एयरपोर्ट एक्सट्रिम मुख्य राउटरको रूपमा छ, जसले WPS लाई मात्र प्रिन्टरहरू जडान गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले मैले म्यानुअल कन्फिगरेसनको सहारा लिनुपर्‍यो।
यो कि यो जटिल पनि छैन कि छैन, तर यो समाधान पाउन मलाई गाह्रो थियो। तपाईंले कन्फिगरेसन अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु पर्छ जुन तपाईंसँग आधिकारिक टीपी-लिंक वेबसाइटमा छ (यहाँ) र PLC-WiFi को कन्फिगरेसन मेनू पहुँच गर्नुहोस्। तपाईं PLC जडित हुनुपर्दछ इथरनेट केबल मार्फत वा तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको त्यो वाइफाइ नेटवर्कमा (पासवर्ड स्टिकरमा छ जुन PLC सँग छ)। तपाईंले «वायरलेस» मेनू पहुँच गर्नुपर्छ र Wi-Fi नेटवर्क (SSID) को नाम तपाईंको मुख्य नेटवर्कको नाममा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।, अपरकेस, लोअरकेस, हाइफन, ठाउँहरू, आदिलाई सम्मान गर्दै।
अब «सुरक्षा» मेनू भित्र पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् र मुख्य राउटरमा उस्तै एक राख्नुहोस्। तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको क्लोन गरिएको वाइफाइ नेटवर्क हुनेछ र तपाईंको उपकरणहरू राउटरले जेनेरेट गरेको पीएलसी वा वाइफाइ द्वारा उत्पन्न भएकोमा जडान गर्न कुनै समस्या हुँदैन।
परिणाम: सबै ठाउँमा वाइफाइ
यो सोच्न भ्रमपूर्ण छ कि हामी यस डुप्लिकेट नेटवर्कको साथ मुख्य कनेक्शनको रूपमा उत्पन्न गर्ने नेटवर्कसँग जस्तै उस्तै कनेक्शन गतिमा जाने छौं। मसँग M०० एमबी जडान छ, लिभिंग रूममा वाइफाइ मार्फत समस्या बिना जडान हुने गति, जहाँ राउटर छ। जे होस्, भान्साकोठामा, जहाँ मैले यो पीएलसी-वाइफाइ राखेको छु, र जुन घरको अर्को छेउमा रहेको छ "केवल" मँ आफ्नो आईफोनमा M० एमबी र मेरो म्याकबुकमा 300० एमबी पाउँछु। अभ्यासमा गतिको हानीको बावजुद, यसको मतलब यो हो कि म कुनै पनि सामग्री स्ट्रिमिंगमा खेल्न सक्दछु वा छिटै कुनै पनि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्छु। मेरो घरको अर्को छेउबाट, जहाँ अबसम्म मैले निरन्तर कटौती र वेग थकाइलाग्दो समयमा भोग्नुप .्यो। मेरो लागि यो अन्तमा समाधान भएको छ, म आशा गर्दछु कि यसले तपाईंलाई पनि मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी तपाईंको घर वाइफाइ कभरेज वाईफाई पीएलसी प्रयोग गरेर सुधार गर्ने
मसँग समान उपकरणहरू स्थापना गरिएको छ, र यो ठीक काम गर्दछ। यो उत्तम मध्ये एक होइन, तर यो सहि तरिकाले अनुपालन गर्दछ। थप रूपमा, यो सजिलै WPS द्वारा कन्फिगर गरिएको छ।
Retox लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल भारत को पहिलो स्टोर प्रतिष्ठित हुन चाहान्छ
Un .9,7 इन्च आईप्याड प्रो को पहिलो अनबक्सिंग